Otumfuo nyame se : "okra biara beka owuo ahwe ". Nipa dodo sen na ekaekae owuo, na wote wonkra ho? Saa nwoma yi botae ne se gyidini bekae owuo na wate ne kra ho. Eno bema watumi abo nyankopon din wo ne homee a, etwato no. Saa nwoma yi beye mfaso ama mmabunu ne mpanin, asukuufo ne fiefo nyinaa.Osman Nûri TopbaşISBN: 978-9944-83-328-8..
Nkwadaa Afotusem 40 Had?th
Saa nwoma yi na anabi (s.a.w) asem (hadis) so kyerekyere subanpa ne suban bonee. Ahadis aduanan na ewo saa nwoma yi mu.twerefo no nam abakosem so de ahadis yi da suban ahoroo adi.abakosem no ma nwoma no akenkan ye anika paa.suban no bi ye: abotre, nokoredie,ne papaye.nwoma no ye mfasoo de ma akenkanfo nyinaa, nkanka asukuufo ne nsempakafo.saa ..
Nea edikan no, nwoma yi kasa fa onyame baakoyɛ ho. Ɛkyerɛ onyame gyinabrɛ ne esom a ɛfata no. Nea ɛtɔso mmienu no fa Muslimifoɔ gyidie ho. Nea edihɔ no kyerɛkyerɛ esom ne emu adesua. Nea enti a ɛwɔsɛ yɛ yɛ salaat, akɔmkyene ne nea ekeka ho. Weinom nyina akyi no, nwoma yi da akyiwadeɛ ahodoɔ a ɛwɔ Islamsom mu. Ne korakora no, ɔtwerɛfoɔ no de ɔ..